Golaha wakiillada Puntland oo meesha ka saaraya xiriir xumo kala dhexaysay shacabka iyo saxaafadda – Kalfadhi
Golaha wakiillada Puntland oo meesha ka saaraya xiriir xumo kala dhexaysay shacabka iyo saxaafadda
Golaha wakiillada Puntland ayaa u ogolaaday daneeyayaasha arrimaha baarlamanku in ay ka soo qaybgeli karaan isla markaasna dhegaysan karaan doodaha kulamada baarlamanka, waxaana markii ugu horaysay si joogta ah saxaafadda loogu ogolaaday in ay si toos ah u tebin karaan doodaha iyo kulamada baarlamanka, markii ay u baahdaan.
Kulamadii Sabtida iyo Axadda ayaa ka duwanaa kuwii hore ee baarlamanku yeelan jiray.
Gudoomiyaha golaha wakiillada Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo-dareed ayaa sheegay in ay jirtay xiriir xumo mudo u dhexaysay baarlamanka iyo shacabka oo aan wax badan ka ogaan jirin waxa ka socda golaha, sidaas la adligeedna uu u qaatay go’aankan.
Dhoobo-daareed ayaa 10kii sano ee la soo dhaafay xubin ka ahaa baarlamanka Puntland ka hor intaan loo dooran gudoomiyaha golaha 4tii Janaayo, 2019
Wuxuu sheegay in kala go’naantaas ay keentay in shacabku u arkaan baarlamanku inuu yahay mid fadhiid ah oo aan shaqo hayn isla markaasna ay xantaan oo ay dacaayadeeyaan.
Waxaan rabaa in aan taa meesha ka saaro oo aan tuso shacabka iyo baarlamanka in aan waxba u dhexayn” ayuu yiri Gudoomiye Dhoobo-daareed oo u waramay warbaahinta Internetka ee DMI.
Urururada bulshada rayidka ah iyo saxaafadda ayaa baarlamanku muhiimad weyn siinayaa si uu u hagaago xiriirka golaha iyo shacabku.
Xeer hoosaadka golaha ayaa dhigaya in dadweynaha iyo saxaafaduba ay ka qaybgeli karaan kulamada baarlaanka si goluhu u noqdo mid daahfuran, hase yeeshee way adkayd in saxaafada iyo dadweynuhuba ay ka qaybgalaan kulamada golaha.
In kastoo ay hadda galeen fasax kooban, Baarlamanka Puntland waxaa u furan oo uu ku guda-jiraa kalfadhigii 43aad. Ajandayaasha u dhiman waxaa ka mid ah in la horkeeno xukuumada cusub si ay u siiyaan kalsoonida.
5 milyan oo DP World looga kireeyey Deked oo aan lagu soo darin Miisaaniyadda Somaliland